Su’aashani waa mid xiiso u leh qof kasta oo baranaya luuqad shisheeye.
Ka dib horumarinta guusha ee qaybaha ugu horreeya ee barnaamijka LingoCard mobile ee meelaynta dadweynaha iyo fudaydhinta helitaanka, app wuxuu helay tobanaan kun oo isticmaala.
Laakiin maxaa ku saabsan barashada luuqadda? Waxaan u maleynay – sababta aan u mideyno dhammaan dadkaas si ay ula xiriiraan afkooda hooyo iyo is caawiyaan.
Natiijo ahaan, waxaan haynaa fikradda ah abuuritaanka barxad caalami ah oo caalami ah oo xalin doonta dhibaatada dhaqanka ee kuwa baranaya luuqadaha ajnebiga ah iyaga oo ka caawinaya inay helaan macalimiin ku habboon.
Laga yaabee luqadda ugu caansan ee isgaadhsiinta caalamiga ah waa Ingiriis. Marka loo eego tirakoobyada, in ka badan 80% tirada guud ee ardayda luuqadaha shisheeye (qiyaastii 1.5 bilyan) waxay baranayaan Ingiriisi waxayna ku dhawaadba tahay in qof kastaa uu u baahan yahay barashada afka.
Halkee baan ka heli karnaa dad badan oo ku hadla afka Ingiriiska?
Maxay dadka ajnebiga ah u baahan yihiin inay nala xiriiraan?
Ugu horreyn, fursada aad ku heli karto lacag online. Malaayiin qof oo adduunka ah ayaa diyaar u ah in ay lacag ka sameeyaan internetka iyaga oo ku hadlaya luqadooda.
Marka labaad, dad badan oo ku hadla afkooda hooyo waxay kaloo bartaan luuqadaha ajnebiga ah, waxayna u baahan yihiin inay ku bartaan luuqada ajnebiga ah ee ay baranayaan. Qaar badan oo ka mid ah waxay doonayaan inay bartaan luqadda aad ku hadasho. Sidaa daraadeed, waxaad isku caawin kartaa inaad waxbartid, adoo adeegsanaya waxqabadyo sida 30 daqiiqo oo lagula xiriiro afkaaga hooyo adigoo is weydaarsanaya 30 daqiiqo oo isgaarsiineed luqada aad wax ku baraneyso.
Marka saddexaad, tiro badan oo dad ah oo dunida oo idil waxay u baahanyihiin waxbarasho online ah waxayna raadinayaan macallimiin ku saabsan farsamada kale. Tusaale ahaan – xisaabta, muusikada, karinta suxuunta qaranka, seyniska saxda ah, xisaabinta, barnaamijyada, naqshadeynta, iwm. Qof walba wuxuu leeyahay xirfad gaar ah iyo karti u gaar ah. Maxaa dhacaya haddii aad ku caawin lahayd inaad barato qof luqadda ay baranayaan, marka wax la baro isla waqtigaas. Tusaale ahaan: Jessica waxay ku nooshahay magaalo yar oo Mareykan ah, waxayna u baahan tahay macalin xisaabeed, laakiin ma heysto lacagta, wayna adag tahay in la helo macallinka saxda ah. Nasiib wanaag, Jessica, si fiican ayaad u baraneysaa xisaabta waana inaad dhab ahaantii ubaahantahay inaad ku hadashid af Ingiriis, laakiin waxaad ku nooshahay Ruushka. Muuqaalkayagu wuxuu kuu soo bandhigi doonaa midba midka kale sidaa darteed waxaad awoodi doontaa inaad barato bilaash markaad wadaagto aqoontaada, xitaa haddii aad ku nooshahay dhinacyada ka soo horjeeda Dunida.
Intaa waxaa dheer, adigoo isticmaalaya barnaamijyadeena inta lagu jiro wadahadalka ama video-ga, waxaad si dhaqso leh u abuuri kartaa kaararka luqadda leh erayo cusub iyo weedho kuwaas oo isla markiiba tagi doona kaydintaada daruuriga ah ee xasuusinta dambe iyo isticmaalaan dhamaan qalabkeena.
Sidaa daraadeed, hannaanka waxbarasho ee caalamiga ah wuxuu u hoggansami karaa anshax kasta waxaanna leenahay fursad aan ku caawino dad badan oo adduunka ah.
Sida ugu fiican ee loo baran karo luqadda waa in si buuxda loogu jihaysto jawiga luqadda, sidaas darteed waxaanu qorshaynaynaa in aanu horumarinno qalab lagu helo guriyeyn dal kasta oo leh fursada ah in lala xiriiro dadka la daggan, iyo sidoo kale awoodda lagu helo fasallada dugsiyada luqadda iyo qorsheynta safarka
Marka ugu horeysa, fikraddeena waxay u muuqan kartaa mid aan macquul ahayn dad badan, laakin iyada oo si sax ah loo hirgelinayo iyo warbixinta macluumaadka dad badan oo adduunka ah, waa wax iska cad in tani shaqayn doonto.
Haddii aad leedahay fikrado xiiso leh oo ku saabsan horumarinta mashaariicdeena ama aad rabto inaad ka qayb qaadato mashruucdayada – noo soo qor waqti kasta.